IDowns yenze okwehlule iBafana eSudan
IGCINE irekhodi lokungehlulwa kwiCaf kule sizini iMamelodi Sundowns kaHaashim Domingo obemxine eduze u-Eid Mugadam we-Al Hilal Omdurman koweCAF Champions League eSudan, ngoLwesihlanu Isithombe: BACKPAGEPIX
Malibongwe Mdletshe | April 5, 2021
UKUBE kuyashintshwana ngemiphumela, iMamelodi Sundowns ibingawudlulisela kwiBafana Bafana umphumela ewuthole idlala ngokulingana ngo 0-0 ne-Al-Hilal Omdurman, eSudan nokusho ukulahla amaphuzu okokuqala ngqa kweyamaqoqo eCaf Champions League ka-2020/2021.
IBafana ingene ehlazweni ngesonto eledlule ihluleka wukungena kweyamanqamu e-2022 Africa Cup of Nations eseCameroon ngoJanuwari, emuva kokuvumela ukunenebulwa yiSudan ngo 2-0 kuleliya lizwe.
Iqembu lakuleli liye emdlalweni lidinga iphuzu kuphela kanti abekhona amathemba emuva kokunqoba ngo 2-0 emlenzeni wokuqala lapha ekhaya. ISundowns yanqoba ngo 2-0 emlenzeni wokuqala eTshwane, kanti isayinqobe yonke imidlalo yayo kwiGroup B nokuyibeka emaphuzwini angu-13, okusho ukuthi ibisivele izifakile esigabeni sama-quarterfinal.
I-Omdurman isendaweni yesithathu ngemuva kweBelouizdad yase-Algeria, ekweyesibili ngamaphuzu ayisithupha. Yize kungasho lutho ukulahla amaphuzu eSudan kweSundowns, kwazise isivele iqedile ngeyamaqoqo kodwa izimbangi zayo kwiDStv Premiership zizomincela ukuthi kutolike njengokubohla kwefomu, eziye ekhefini lemidlalo yeFederation of International Football Association zishaya ngayo.
ISundowns evikela isicoco, yiyo yodwa engakehlulwa emidlalweni yeDStv Premiership kule sizini. Ukungadlali kweyeligi kule mpelasonto kusho ukuthi izobuya ngoLwesibili neTshakhuma Tsha Madzivhandila ePeter Mokaba Stadium, ePolokwane, isele ngemidlalo emithathu ezimbangini zayo.
ISundowns iqhwakelele esicongweni selog ngamaphuzu angu-40 kanti kwabayijaha eduze kubalwa izimbangi ezingajwayelekile ngasesicongweni, iLamontville Golden Arrows naMaZulu FC. Kukhona ne-Orlando Pirates, ebuyela enkundleni neMaritzburg United ngoLwesithathu.
Endaweni yesithathu ngemuva kweSundowns, ikhona neSuperSport United ubuholi bayo obulokhu buyiphike njalo imibiko ethi leli qembu liyadayisa.
Ukungathembeli kubadlali beSundowns yize yenza kahle kwiligi nasemidlalwemi yeligi, ngenye yezinto ezilethele obengumqeqeshi weBafana, uMolefi Ntseki, ukugxekwa ngokubhacaza kweqembu lakhe.
ISundowns isesethubeni lezicoco ezintathu kule sizini kwazise ngaphezu kweligi neChampions League, kusekhona neNedbank Cup ezohlangana kuma-quarterfinal ayo nePirates ngo-Ephreli 15 eLoftus.